Balaxazwe ngummeli wabo - Ilanga News
Home Izindaba Balaxazwe ngummeli wabo
Balaxazwe ngummeli wabo
Uthe lokhu ukwenza ngenxa yezimiso nezinkolelo zakhe
ABANTU bebephume ngobuningi babo bemi ngaphandle kwenkantolo yaseVerulam lapho bekuqhubeka khona icala labasolwa ngokubulala ePhoenix.
ULAXAZE amakilayenti akhe kuhle kwenyongo yenyathi, wangabeka zizathu ummeli wabamangalelwa emacaleni okubulawa kwabantu ePhoenix, eThekwini, obekumele bavele eNkantolo yeMantshi yaseVerulam, beyofaka isicelo sebheyili.
Lokhu kuphoqe ukuba ukulale-lwa kwalesi sicelo kuhlehlele uLwesihlanu lapho abasolwa bezobe sebeqoke omunye ummeli.
U-Adv Kessie Naidu obemele ummangalelwa wokuqala nowesibili okunguMnu Dylan Govender (29) noMnu Ned Govender (30) – bobabili bekulindeleke ukuba bayofaka isicelo sebheyili ecaleni lokubulala uMnu Mandla Majola (19) namanye okuzama ukubulala – uqome ukuzilaxa lezi zelamani.
lezi zinsizwa zakwaGovender bezivele noMnu Jeetendre Jaikissoon (39) ongummangalelwa wesithathu kuleli cala lokubulala. Bonke bekulindeleke ukuba kuqhubeke nesicelo sabo sebheyili.
Abasolwa bangene ebhokisini beziswenkele ngamayembe ayisikotshi, bebonakala bethukile. Ngaphakathi enkantolo bekune-nqwaba yabantu, okubalwa namaqembu ezepolitiki.
“Lokhu kangikwenzi ngoba nginokwesaba, kodwa kungenxa yezimiso nezinkolelo zami,” kusho yena. umshushisi kuleli cala, uMnu Nelson Mbokazi, akazange aphikisane nokuhlehla kwecala.
Ngaphambi kokuba ahoxe u-Adv Naidu, ubacelele emantshini ukuba abamangalelwa bagcinwe esitokisini samaphoyisa eDurban Central, ngezizathu zokuba buthaka kwempilo yabo, nokuthi kube lula ukuxhumana nommeli wabo ozoqokwa.
NgoLwesibili umphenyi wecala, uDet Serg Siphosenkosi Shezi, uvezele inkantolo akubona kwisi-thombemnyakazo (video) esaqo-shwa ngamakhamera omuzi oqo-ndene nalapho kwenzeka khona isigameko.
Utshele inkantolo ukuthi ngesikhathi ehambele ePhoenix, ofakazi bamyisa endaweni yesiga-meko, okwathi uma efika khona, waqaphela ukuthi kunomuzi onamakhamera abheke ngakhona.
Uthe babe sebenikela kulo muzi, bafica owesifazane ongumama wakhona, owabadlalela isithombemnyakazo.
Kuleso sithombemnyakazo, utshele inkantolo ukuthi kuyabonakala abesilisa abamnyama ababalelwa kwabayisihlanu behamba bengaphethe lutho.
Uthe kubonakala neFord eqhamuka ngesivinini inabomdabu baseNdiya, kubonakale izisulu zibaleka.
UDet Serg Shezi, uthi kubonakala iNissan emhlophe nayo eqhamuka ngesivinini ihamba abomdabu baseNdiya nabo abavimbezela izisulu.
Uthe ummangalelwa wokuqala wayekwiNissan, kanti uyabonakala kwisithombemnyakazo ephuma, edubula esinye sezisulu kodwa wageja.
Uthi izisulu ziyabonakala ziba-leka ziyocasha komunye umuzi, kanti ummangalelwa wokuqala nowesibili nabo bayabonakala bebalandela, beyobakhipha lapho becashe khona.
Uthe esinye sezisulu siyavela kulesi sithombemnyakazo sishibilika, siwa, okulapho ummangele-lwa wokuqala waya kusona asigxamalazele, wasidubula ebusweni.
Umangalelwa wesithathu naye kuvela ukuthi uyabonakala egenca esinye isisulu yize sase siphaka-mise izandla, sikhombisa ukucela “umaluju”.
UDet Serg Shezi uthe uyaphiki-sana nokuthi abasolwa bathole ibheyili ngoba kwayibona kaba-phephile uma bengadedelwa kwazise abantu bathukuthele.
Previous articleKuboshwe inkosikazi kwelokufa komyeni
Next articleSihlela ukuwaphanyeka emgibeni isilomo